Be With You ( 2018 ) - Myanmar Asian TV
Update movieလေးတွေကိုကြိုးစားတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အတိုင်းနောက်တစ်ကားလေးကတော့ Be with youဆိုတဲ့ 2018မှာထွက်ရှိလာတဲ့ Movieလေးပါ …
ဂျပန်ရဲ့နာမည်ကြီးကားဖြစ်တဲ့ 2004မှာထွက်ထားတဲ့ ” Takuji Ichikawa ” ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတာပါ လူတိုင်းကြည့်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ် …
Korea versionကကောဘယ်လိုပြန်ရိုက်ကူးမလဲ ကြည့်ကြရအောင် …
Main Casts တွေကတော့ Master’s of Sun , Battleship အပြင်အခြားနာမည်ကြီးကားတွေရဲ့ ဇာတ်ကျော်ကြီး
”So Ji Sub” နှင့်
ကျောက်မဖြစ်တဲ့နှလုံးသားရုပ်ကြွင်း လက်ရှိနာမည်ကြီးနေတဲ့ Something in the rain ထဲက မင်းသမီး ”Son Ye Jin”
Rating မှာလည်း IMDb 7.4/10ထိရရှိထားပြီး Box Officeမှာလည်း US$19.3 millionထိရရှိထားပါတယ် …
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ”ကောင်းကင်တိုင်းပြည်နဲ့လူသားကမ္ဘာကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့ ဘူတာရုံးလေးတစ်ခုရှိပါတယ် …
မိုးရာသီရောက်ရင် ကိုယ်မျှော်နေတဲ့သူက မိုးနှင့်အတူပြန်ရောက် လာမယ်လို့ဆိုစမှတ်ပြုကြတယ်” …
ဇနီးဆူးအာ(SoYeJin)ဖြစ်သူကွယ်လွန်ပြီးသားဖြစ်သူ ဂျီဟိုကိုတစ်ယောက်တည်းစောင့်ရှောက်လာတဲ့ ဝူဂျင်း (So Ji Sub)
ဒါပေမဲ့ သူမ မဆုံးခင်မှာတစ်နှစ်ကြာရင်ပြန်လာမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ် …
တစ်နှစ်ကြာပြီးနောက်မှာတော့ ဘူတာရုံလေးမှာပြန်ပေါ်လာတဲ့ ဆူးအာ …
ဆူးအာကဘာကြောင့်သေသွားရတာလဲ …? သေပြီးတဲ့သူကဘာကြောင့်ပြန်ပေါ်လာတာလဲ …?
မှတ်ဥာဏ်တွေရပြီးရင်ရော သူဆက်နေဖြစ်မှာလား …? ပြန်သွားရမလားဆိုတော့ …?
ဆူးအာဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကကော နောက်တစ်ဖန် ၀ူဂျင်းကို ချစ်မိသွားအုံးမှာလား…
ဇာတ်လမ်းက ၅၂၈ မေတ္တာနဲ့ ၁၅၀၀ မေတ္တာ နှစ်ခုစလုံး ခံစားမိစေပြီး
သားနဲ့ အမေ … ကောင်လေး နဲ့ ကောင်မလေး …. အဖေ နဲ့ သား …
ဒီလို သံယောဇဉ် လေးတွေကြားမှာ ဘယ်လိုမျိုး ရသ ထပ်ပြီးတော့ ပေါင်းစပ်ထားတာလဲ ….
ဇာတ်လမ်းလေးကို တစ်ခါ ကြည့်ရုံနဲ့ ရင်ထဲမှာ အမှတ်တရ ဖြစ်သွားစေနိုင်မယ့် ဇာတ်ကားမျိုးလေး ဖြစ်လို့ ကြည့်ရှု့ ခံစားလိုက်ပါအုံးခင်ဗျာ…..
Translator : MMATV Translate Team
Encoder : Min Theim Kyaw(MTK)
Quality : FHDRip 720p
Actors: Ji-seob So, Kim Hyun-soo, Ko Chang-seok, Lee You-jin, Ye-jin Son, Yoo-ram Bae
Quality: FHDRip 720p
My Love, My Bride ( 2014 )
အခုတစ်ခါတင်ဆက်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးကတော့ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်၂ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jo Jung-suk နဲ့ မင်းသမီးချောလေး Shin Min-ah တို့ပါဝင်ထားတာပါ … ဇာတ်ကားလေးရဲ့နာမည်ကတော့ My Love , My Bride ပါ … ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ မင်းသမီးလေးက ပန်းချီဆရာမလေး မီယောင်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပြီး မင်းသားကတော့ လူမှုစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာက ဝန်ထမ်းလေး ကဗျာတွေရေးရတာဝါသနာပါသူ ယောင်းမင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထား ပါတယ်…
Trailer: Be With You ( 2018 )